UDANIEL WEBER-UBUNGAKANANI BENETHI, I-BIO, IWIKI, UBUDALA, I-CAREER, UBUDE, UMHLA WOKUZALWA - IINDABA
Iminyaka engama-41 ubudala
Okthobha wamashumi amabini,
IMassapequa, Idolophu yaseOyster Bay
Malunga noDaniel Weber
Imvumi yaseMelika, ikatala, umlingisi, kunye nomphathi weshishini ovela eMelika uyacelwa UDaniel Weber . Ngapha koko, uyaziwa kakhulu ngokuba ngumyeni weqonga elidumileyo laseCanada nelazalelwa eIndiya kunye nemannequin egama linguSunny Leone. Ukhonza endaweni yegitare ekhokelayo ngaphakathi kweqela lomculo elibizwa ngokuba yiDisparrows. Njengomdlali weqonga, wenza i-movie yakhe yokuqala kwiJackpot ngaphakathi kweenyanga ezili-2013 ngo-2013. Emva koko, wayenokubonwa ngaphakathi kwiMovie bhanyabhanya, Uthando lweBeimaima kwi2016. . Njengosomashishini, uqhuba ikhaya lakhe lokuvelisa eMumbai eligama linguSunCity Media kunye noLonwabo.
Selena movie apho ukubukela
Umlingisi uSunny Leone uchithe usuku lwasemva kwemini kunye nomyeni wakhe uDaniel Weber. Ilanga lithathe i-Instagram, indawo ayithumele kuyo umfanekiso kunye nomyeni wakhe. Umdlali weqonga uthumele umfanekiso kunye noWeber, indawo athe wabona kuyo ezemidlalo isikipa esimnyama, ikepusi ye-baseball, kunye neemaski, ngelixa uSunny ebonwa ehamba kunye naye enxibe ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka ezinzulwini zobusuku. I-Sunny Leone ichithe ixesha elininzi kwiinyanga ezili-12 ngaphakathi e-US kunye nendlu yayo ngenxa yokuziva ikhuselekile phaya e-India kwincopho yesifo i-COVID. Umhla wasemva kwemini nge @ dirrty99, wawuchaza umfanekiso.
ixesha lobusika lobhuti omkhulu
Umthombo: @ mid-day.com
UDaniel Weber uyindumasi ngokuba ngumdlali weqonga, isiginci, umphathi weshishini ukongeza kwimvumi. Waziwa kakhulu ngokuba liqabane lomlingisi waseIndiya waseMelika, uSunny Leone. Ngaphezu koko, uphakame kakhulu ngomsebenzi wakhe kwiimuvi ze-Bollywood ezihambelana neJackpot, Uthando lweBeimaima, kunye nokunye.
Ngomhla wamashumi amabini ku-Okthobha u-1978, uDaniel Weber wazalelwa eMassapequa, Idolophu yaseOyster Bay, e-USA. Idolophu yakowabo iseBellmore, eNew York, eMelika. Ubambe ubuzwe baseMelika kwaye ungowobuhlanga baseMelika-Mhlophe. Uhlanga lwakhe luMhlophe. ILibra luphawu lwakhe lweZodiac kwaye ukholo lwakhe bubuYuda / ubuJuda. Ukusukela ngo-2020, wabhiyozela usuku lokuzalwa kwakhe amashumi amane ananye. Wazalelwa kunina noyise; UTzipi Abraham Weber (umama), kunye noTommy Weber (utata) abangachazwanga kodwa. Ukhule ethatha inxaxheba ezitalatweni zaseMassapequa ecaleni kwabantakwabo. Njengokufunda kwakhe, u-Weber wajoyina indawo engeyiyo eyunivesithi yoluntu kwimfundo yakhe. Waye kwiYunivesithi yaseOhio State.
chipotle iminyaka entsha eve iiyure
UDaniel Weber yindoda epholileyo enobude obude beesentimitha ezintandathu kunye nee-intshi ezimbini ze-1.88 m. Ubunzima bomzimba wakhe obulungeleleneyo buqukethe i-86 Kg okanye i-190 lbs. Ubukhulu besifuba sakhe singama-42 ngaphakathi, ubungakanani besinqe ngama-34 kunye nobukhulu be-biceps bu-16. Unamehlo amdaka ngombala kwaye iinwele zakhe zimnyama. Uye wongeza imithambo ye tattoo emzimbeni wakhe.
Umsebenzi kaDaniel Weber
Emva kokuba uDaniel Weber egqibile ubuchule bakhe, waqala umsebenzi wakhe kwezomculo ngokwenza imiboniso kunye nezihlandlo.
Unokuba ngumgcini wegitare ophambili webhendi ye-rock ebizwa ngokuba yi-The Disparrows.
Njengomdlali weqonga, wenza umdlalo wakhe wokuqala ngaphakathi kwishishini leemovie laseIndiya, elaziwa kakhulu ngokuba yiHollywood, ngomsebenzi we-cameo ngaphakathi komdlalo bhanyabhanya waseHindi ohlekisayo weJackpot eyongeze iqabane lakhe, iSunny Leone.
Wayekwangumntu owongeziweyo ngaphakathi komdlalo bhanyabhanya weqonga ka-2010, iVirginity Hit, kunye neSunny.
Umthombo: @ instagram.com / dirrty99 /
Uye wongeza ngokubhekisele kwi-movie yabantu abadala, Yonke i-Sunny ngalo lonke ixesha, kunye ne-Sunny.
Kwi-drama ye-2015 evuyisayo,
U-Ek Paheli Leela, wenza umsebenzi wenqwelomoya.
Emva koko wafumana i-imeyile kwiColors Channel nakwiViacom 18 ngokubhekisele ekuthatheni inxaxheba kukaSunny Leone kwiBigg Boss. Kodwa waqala walikhaba unikezelo njengoko wayecinga ukuba inokuba yingxabano. Emva kwexesha, wamkela emva kwencoko kunye neLanga eliqaphele ukuba uSunny uza kulo kubandakanya iBig Boss Season 5, ngo-2011 njengomntu othabatha inxaxheba kwikhadi lasendle.
Ukongeze inkwenkwezi kumdlalo bhanyabhanya waseHindi, Uthando lweBeimaima.
Ngaphandle koku, ukongeza unekhaya lokuvelisa, iSunCity Media kunye noLonwabo, kunye neqabane lakhe.
Umfazi kaDaniel Weber, kwiLanga leLeone
Lil boosie kunye ne-webbie yenkomo
Ngokumalunga nokuma komtshato kaDaniel Weber, ngumntu otshatileyo. Watshata nomlingane wakhe othandekayo, uSunny Leone, ongumdlali weqonga ngaphakathi kwishishini leemovie laseIndiya. Unokuba ngumdlali weqonga ongamanyala. Unobumi baseCanada naseMelika. Uye wasebenzisa isihloko senqanaba, uKaren Malhotra. I-duo inokusikelelwa ngoonyana ababini kunye nentombi. Igama loonyana babo ngu-Asher Singh Weber (Wazalwa ngo-2018 ngendlela ye-Surrogacy) kunye no-Noah Singh Weber (owazalwa ngo-2018 ngendlela ye-Surrogacy) kanti intombi yabo, u-Nisha Kaur Weber yamkelwa ngabo kwiinyanga ezili-12 ngo-2017. UDaniel wadibana no-Sunny Ixesha lokuqala kwibhaso lisebenza ngaphakathi eUnited States. Emva kokunikezelwa kwebhaso, wacela uSunny ukuba abenomhla, nangona kunjalo engakhange asamkele isicelo. Emva kwemigudu emininzi, uLeone wasamkela isicelo sakhe kwaye waba yintombi yakhe. Emva kobudlelwane ixesha elide, esi sibini sizimisele ukutshata. Emva koko, nge-20 kaJanuwari 2011, uDaniel Weber wabopha iqhina kunye neqabane lakhe iSunny Leone. Umsitho wabo womtshato wawubanjelwe eGurdwara ngezithethe eziqhelekileyo. Njengangoku, esi sibini sihlala kwaye sonwabile ngobomi babo kakhulu kungekho ndlela iphazamisayo. Ngenye imini kudliwanondlebe, uSunny wabelana malunga nendlela anothando kwaye emxhasa ngayo uDaniel kuye. Ukuqhelaniswa kwakhe ngokwesondo kuqondile kwaye akangobufanasini. Ukuza kuthi ga ngoku, umzi uhlala eMumbai.
I-Net Worth kaDaniel Weber
Ezinetalente ezininzi kunye nenzuzo kaDaniel Weber ngumdlali weqonga owaziwayo, umphathi weshishini ukongeza kwigitare oye waqokelela isixa esikhulu semali kuyo yonke imisebenzi yakhe kude kube ngoku ngokuqinisekileyo. Ufikelele kwincopho emnandi kubugcisa bakhe kwaye uyonwaba ngengeniso yakhe yobungcali ngokuhlala ngendlela ebizayo yobomi. Ukusukela ngo-2020, ixabiso lewebhu elichanekileyo likaDaniel Weber lingaphantsi kovavanyo nangona kunjalo kucingelwa ukuba phakathi kwe- $ 1 yezigidi- $ 5 yezigidi. Unikezelo oluphambili lwengeniso luvela ekwenzeni umsebenzi. Akukho mbuzo mncinci ngaphakathi kweengcinga zabalandeli bakhe ukuba unomvuzo opholileyo wobungakanani kulo msebenzi wakhe. Uyonwabile nokuba wenza ntoni ngoku.
Umthombo hyperlink: birthdaywiki.com
Izigaba: Amazon-Prime Iwiki Inetflix
ngumfundisi ibali eliyinyani
isamente semipu emincinci
yenyuka mcgowan ubone
kroy biermann 2017 ixabiso elifanelekileyo
Umfazi kaDick van dyke